I-Beats Fit Pro iya kuqaliswa eYurophu naseCanada ngoJanuwari 24 | ndisuka kuMac
Kule nyanga inye ukufika kwee-headphone ze-Beats Fit Pro kuqinisekiswa kwilizwekazi elidala naseCanada emva kokusungulwa kwayo e-United States. Ifemu ngokwayo yayinoxanduva lokupapasha iindaba eqinisekisa ukuqaliswa ngokusemthethweni okukufuphi kwezi headphones ezingaphakathi, zonke kwi-akhawunti ye-Twitter esemthethweni emva kokuphendula kumsebenzisi.
Inyaniso kukuba akukho umhla osemthethweni oqinisekisiweyo ngolo hlobo, kodwa amanqaku amaninzi eendaba njengomhla osemthethweni ngoMvulo olandelayo, nge-24 kaJanuwari. I-Beats Fit Pro zezona Beats zintsha ze-Apple, zongeza uhlobo lwamaphiko aguquguqukayo ukuwagcina emile endlebeni, i-case yokutshaja, iindawo ze-silicone, ukucinywa kwengxolo esebenzayo, i-audio yendawo kunye nokulandelwa kwentloko kunye ne-chip H1 enika inkxaso " Hey Siri".
i-tweet esemthethweni apho babonise khona ukufika kwezi Beats zintsha:
ⓘ Kukho into entsha ezayo.
-Ibetha ngu-Dre UK (@beatsbydreUK) January 10, 2022
Ukongeza kumhla wokukhutshwa kwe-24 kaJanuwari eYurophu naseCanada, kulindeleke ukuba abasebenzisi abavela eJapan ukuqaliswa kufika kwi-28th kwinyanga enye. Ezi headphones zifumaneka ngemibala emine: pink, grey, white and black. Kuya kuba lixesha lokuba sibone ukuba izibikezelo zala majelo zizalisekile okanye akunjalo kwaye sibone ukuba mangaphi amazwe afumanekayo ngoMvulo ozayo we-24, ngethemba lokuba owethu ngomnye wabo. Lonke ulwazi kwezi headphones Beats ziyafumaneka kwiwebhusayithi Apple kwaye kwi ibetha iwebhusayithi esemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » IBeats Fit Pro iza kusungulwa eYurophu naseCanada nge-24 kaJanuwari
NgokukaKuo iiglasi zeNqobo eziNgcono ziya kusebenzisa itshaja efanayo ne-14 "MacBook Pro